१९ वर्षको उमेरमा नै संसार छाडेकी यी अभिनेत्री,जसको मृत्यु अझै रहस्य रहयो ! – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsBollywood१९ वर्षको उमेरमा नै संसार छाडेकी यी अभिनेत्री,जसको मृत्यु अझै रहस्य रहयो !
१९ वर्षको उमेरमा नै संसार छाडेकी यी अभिनेत्री,जसको मृत्यु अझै रहस्य रहयो !
January 24, 2019 Tulasa Karki Bollywood, Celebrity, News 0
बलिउडकी निकै चर्चित नायिका अन्तरगतकी एक नायिका हुन दिब्या भारती
। उनको मृत्यु १९९३ अप्रिल ५ मा भएको थियो । सो समय उनि मात्र १९ वर्ष थिन ।
सानो उमेरमै बलिउड फिल्म नगरीमा आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न सफल उनको
खाउ- खाउ,लाउ-लाउ गर्ने १९ वर्षको उमेरमा नै मृत्यु भयो । उनको हत्या भएको थियो या आत्माहत्या कसैले पत्ता लगाउन सकेनन
हिन्दी र तलेगु लगाएतका विभिन्न फिल्महरुमा अभिनय गरेकी भारतीले सानै उमेरमा धेरै सफलता प्राप्त गरेकी थिन । उनको मृत्यु एक अपार्टमेन्टको कौसीबाट खसेर भएको भनिएता पनि उनको मृत्युलाई हत्याको नाम दिएर विवाद समेत भएको थियो । तर अहिले सम्म पनि उनको मृत्यु अझै रहस्यनै रहेको छ । उनले दीवाना, रंग, शोला ओर सबनम, गीत लगाएतका धेरै फिल्महरुमा अभिनय गरेकी थिन ।
ज्योतिस हरिहर अधिकारीको शुभ लभ सार्बजनिक
सलमान सँगको प्रेम पूर्ण विराम नलाग्दै अभिषेकसँग विवाह गरेकी थिन् ऐश्वर्याले,यस्तो थियो कारण